Ny tranofiara 'Escape Room' an'i Robitel dia fitsaboana sarotra - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Sarimihetsika hafahafa ny tranofiara 'Escape Room' an'i Robitel
Sarimihetsika hafahafa ny tranofiara 'Escape Room' an'i Robitel
by Timothy Rawles Oktobra 19, 2018
nosoratan'i Timothy Rawles Oktobra 19, 2018
Fihetseham-po mahazatra ho an'ny tranofiara hisokatra miaraka amin'i Malvina Reynolds '"Little Boxes", ho an'ny sarimihetsika momba ny olona manandrana mandositra azy ireo amin'ny alàlan'ny fahendreny ihany.
Toy izany no napetraka ho an'i Adam Robitel, izay nantsoina tsara Mialà sasatra izay miditra amin'ny teatra amin'ny volana Janoary 2019. Robitel no iray nijery azy hatramin'ny Maka an'i Deborah Logan lasa kamboty. Nanaraka izany izy tamin'ny fahombiazana lehibe Mamitaka: ny lakileny farany.
Raha ny fahitany ny sarimihetsika farany nataony dia manaraka ny lohahevitra tsy takatry ny saina izy fa mampiditra fikotranana miolakolaka amin'ny endrika piozila ara-batana. Raha sendra teraka ianao omaly, ny lohateny dia manondro ny trangam-piangonana lehibe indrindra hatramin'ny karaoke.
Ny lalao tena izy dia manomboka amin'ny fametrahana vondron'olona ao amin'ny efitrano misy foto-kevitra miaraka amin'ny fotoana nomena mba hahitana lalan-kivoahana alohan'ny hivoahan'ny fanairana. Robitel dia naka an'io hevitra io ary nahatonga azy hampiahiahy sy mampihorohoro kokoa.
Ity ny famintinana ofisialy:
“Efitrano fandosirana dia mampihetsi-po ara-tsaina momba ny olon-tsy fantatra enina izay mahita ny tenany fa amin'ny toe-javatra tsy takatry ny sainy ary tsy maintsy mampiasa ny sain'izy ireo hahitana ny famantarana na maty. "
Mialà sasatra hisokatra amin'ny sinema amin'ny Janoary 2019.
Ny tranofiara 'Creep Nation' dia hizaha ny fitokisanao amin'ny fiarovana ny olon-tsy fantatra
iHorror Oktobra Marathon Movie: herinandro 4